Tilmaamaha Safarka Malacca Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Xaaladda Covid-19 ee Malaysia
Magaalada Malacca (Malaay: Bandaraya Melaka, iyo si rasmi ah Magaalada Melaka) waa magaalo iyo caasimada gobolka Malacca, Malaysia.
Malacca casriga ah waa magaalo duug ah oo firfircoon oo leh taariikh iyo dhaqan u gaar ah oo ka soo jeeda caasimaddii boqortooyadii Malay ee xoogga badnayd ka hor xilligii gumeysiga, iyo sidoo kale Boortaqiiska, Holland iyo Ingiriiska oo ku xigay. Xarunta Magaalada waxaa UNESCO ku dartay Liiskii Dhaxalka Adduunka ee UNESCO bishii Luulyo 2008, iyo Georgetown, Penang.
Imaatinka Suldaanka ugu horeeya, Malacca waxay ahayd tuulo kaluumeysi fudud oo ay dagan yihiin Maleyshiyaadka maxalliga ah. Saldanada Malacca waxaa aasaasay Parameswara, sidoo kale loo yaqaan Iskandar Shah ama Sri Majara, Raja ugu dambeeya ee Singapura (magaca Malay ee Singapore) ka dib weerarkii Majapahit ee 1377. Parameswara wuxuu helay jidkiisa Malacca 1400 halkaas oo uu ka helay deked, la heli karo xilliyada oo dhan iyo barta istiraatiijiga ah ee ku taal marinka Malacca. Tani markii dambe waxay noqotay Malacca.
Waxaa jira halyeeyo xiiso leh oo ku xeeran aasaaska iyo magac bixinta Malacca. Sida ku xusan qarnigii 16aad Malay Annals, magaalada waxaa aasaasay Parameswara. Qaarkood waxay rumaysan yihiin inay u badan tahay inuu ahaa amiir Hindu ah oo baxsad siyaasadeed ka yimid Java meel u dhow. Halyeeygu wuxuu sheegayaa in Parameswara uu ugaarsi ugaarsanayay gobolka isla markaana uu u istaagay inuu naftiisa ku nasto meel u dhow halka hada loo yaqaan Webiga Malacca. Taagan agagaarka a melaka Geedka loo yaqaan 'Indian gooseberry' wuxuu la yaabay markhaati ka ahaa mid ka mid ah eeyadiisii ​​ugaarsiga ahaa oo ay ka yaabeen diir jiir oo ku dhacay wabiga. Parameswara wuxuu tan u qaatay inay calaamad u tahay awooda daciifka ah ee ka adkaata kuwa awooda leh wuxuuna go'aansaday inuu dhiso caasimada boqortooyadiisa cusub halka uu taaganyahay, isagoo ugu magac daray geedkii uu ku hooyanayay. Xisaab kale ayaa leh Malacca waxaa laga soo dheegtay erayga Carabiga Malakat, oo macnaheedu yahay suuq. Malacca waxay laheyd deked ay maraan maraakiibta oo ay gabaad ka dhigato Sumatra oo u dhow cariiriga cidhiidhiga ah. Goobta waxaa la siiyay biyo fara badan oo biyo macaan, waxay ku raaxeysaneysay goob qiimo leh marka loo eego dabeylaha rog rogaya ee monsoon, waxayna ku laheyd meel bartamaha qaababka ganacsiga gobolka, kuwaas oo dhamaantood dhawaan ka dhigay magaalo ganacsi oo barwaaqo ah. Nasiibkeedu wuxuu kordhay markii si rasmi ah loo qaatay diinta Islaamka qarnigii 14aad. Salaadiintii Malacca waxay durba soo jiiteen ganacsato carbeed oo meelo fogfog ka yimid. Si kastaba ha noqotee, Malacca waxay sii waday inay la ganacsato ganacsatada dhammaan jinsiyadaha iyo diimaha.
Booqashadii Admiral Cheng Ho ee muslinka Shiinaha badhtamihii qarnigii 15aad, xidhiidhkii Shiinaha iyo Malacca wuu xoogeystay. Badbaadinta kahortaga Siam, Malacca waxay noqotay dowlad hoos tagta Ming China. Si loo hubiyo amniga Malacca, boqortooyo cusub oo awood leh waxaa aasaasay Suldaanka Samudra-Pasai.
Awoodda Maleysiyadu waxay bilaabatay inay kacdo illaa qarnigii 15aad. Malay Annals, Sultan Mansur Shah waxaa lagu xusay inuu leeyahay lix xaas, tan shanaadna waxaa lagu sheegay inay tahay gabar uu dhalay Ming Emperor. Si kastaba ha noqotee, taariikhda Shiinaha, dhacdo noocan oo kale ah lama duubin.
Waxyaabaha waxay bilaabeen inay is badalaan imaatinka Burtuqiiska sanadkii 1509. Markii ugu horaysay waa la soo dhaweeyay, laakiin ganacsatada Hindida ayaa si dhakhso leh suldaanka uga hor istaagay Boortaqiiska waana inay cararaan. Sanadkii 1511-kii Burtuqiiska ayaa soo noqday, iskudaygoodi labaadna wuxuu ku qabsaday magaalada. Tani waxay calaamad u ahayd bilowgii sameynta beel weyn oo Eurasia ah. Boortaqiiskii wuxuu u rogay magaaladii qalcad weyn oo derbi laga buuxiyay oo leh munaarad birqaya oo madfac ka buuxo. Waxaa la rumeysnaa in dhufeysyada noocan oo kale ah ay u adkeysan karaan ku xadgudubka quwadaha kale ee reer yurub ee doonaya xiqdi ka mid ah ganacsiga alaabada qaaliga ah ee Aasiya.
Isbahaysi u dhexeeya Dutch iyo Sultan of Johor wuxuu arkay luminta badan ee awoodda Malacca. 1641 ciidamada badda ee Nederland waxay xayiraad saareen Malacca waxayna la wareegeen magaalada lix bilood kadib. Intii lagu guda jiray go'doominta inta badan magaalooyinkii Boortaqiiska way burbureen.
Kaliya 150 sano kadib ayay Dutchku lumiyeen hanashadoodii Malacca. Sanadkii 1795 Nederland waxaa qabsaday Faransiis, Ingriiskuna wuxuu doonayay inuu la wareego hantidii Holland ee Malacca. Waqtigaas, Malacca waxay lumisay inta badan muhiimaddeedii hore, in kasta oo ay qayb muhiim ah ka ahayd jidadkii ganacsiga Aasiya.
Albaabka A Famosa ayaa ah waxa ka haray qalcadihii hore ee Boortaqiiska iyo Holand. Sidii Dagaaladii Napoleonic u burbureen Ingiriisku wuxuu ogaa in Malacca lagu celin doono gacanta Nederland. Si magaalada looga dhigo mid aan la aqbali karin darbiyada magaalada ayaa la dumiyay. Faragalinta daqiiqadii ugu dambeysay ee sarkaal Ingiriis ah, da 'yarta Sir Stamford Raffles (aasaasaha British Singapore) ayaa badbaadiyay albaabka. Waxyar ka dib markii ay ku soo laabatay xukunkii Holland, dawladaha Nederland iyo Ingiriiska waxay isku beddeleen gumeysi - British Bencoolen oo ku sugnaa Sumatra oo loo yaqaan Dutch Malacca.
Malacca waa Xarunta Peranakan dhaqanka. Markii deggeneyaasha Shiinaha markii hore u yimaadeen Malacca macdan qodayaal, ganacsato iyo qaboojiyeyaal, waxay qaateen aroosyada maxalliga ah (ee Javanese, Batak, Achenese, iwm.) Waxayna qaateen dhaqanno badan oo maxalli ah. Natiijada tan ayaa ah isku darka xiisaha leh ee dhaqamada maxalliga iyo Shiinaha. Ragga waxaa loola hadlayaa sida Babas iyo dumarka Noyas addoommadooda macnahoodu yahay Master iyo Mistress.
Koox yar oo Eurasia ah oo asal ahaan ka soo jeeda Boortaqiiska ayaa sii wadaya inay ku hadlaan caqiidadooda gaarka ah, ee loo yaqaan Cristão or Kristang.
Baska Batang (jaale, kareem iyo casaan) oo ka yimid Melaka Sentral ayaa dhaafi doona garoonka diyaaradaha. Basasku waxay istaagi doonaan wadada weyn oo qiyaastii 200m u jirta dhismaha garoonka diyaaradaha. Tuahbas Lambar 65 (buluug iyo caddaan) illaa Taman Merdeka sidoo kale waxay ka timaadaa Melaka Sentral oo dhaafta garoonka diyaaradaha iyadoo sii maraysa Bachang
Madaarka Caalamiga ah ee Kuala Lumpur KLIA, () waa garoonka diyaaradaha ee ugu dhow wuxuuna ku dhow yahay baabuur qiyaastii 1.5-2 saac. Marmar shirkadda basku waxay maamushaa 4 bas oo toos ah maalin kasta saacadaha 09:15, 11:45, 16:15 & 20:15 (RM22 / 16 qof weyn / cunug), waqtiga safarka 2 saac 30min, laakiin haddii aad u xiisto iyaga, waa inaad ka weecataa KL ama tagsi u raac wakhtiga safarka qiyaastii 1.5 saacadood (go'an “miisaaniyad” qiimaha RM159, 1 dariiqa, ka soo horjeedka gudaha Imaanshaha Guryaha, waardiyuhu wuxuu si farxad leh adiga iyo taratankaaga shandadaha ah dib ugu soo celin doonaa aaggan dibedda).
Malaysia Airlines uma duusho Malacca, laakiin waxay xafiis ku leedahay Lot 1 & 2, Block A, Ground floor, Century Mahkota Hotel, J. Merdeka, Melaka. ☎ + 60 6 282 9597.
Basas badan oo dheereeya oo dheereeya ayaa isku xira Malacca iyo Kuala Lumpur, Seremban, Johor Bahru, Singapore iyo qaybo kale oo ka tirsan Jasiiradda Peninsular. Dhamaan basaska dhaadheer iyo kuwa maxaliga ah ayaa hada ka shaqeeya Melaka Sentral boosteejada baska, meel fiican oo 4.5 km u jirta xudunta taariikhiga ah ee magaalada.
Si aad u gaarto degmada weyn ee taariikhiga ah qaado baska lambarka 17 oo ka baxa boosteejada basaska gudaha ee Melaka Sentral ee baska '17'. Baskaan wuxuu aadaa Chinatown iyo Taming Sari. Joogitaanka ugu dhow ee magaalada Chinatown waa Dutch Square, oo aad si fudud uga garan karto bulukeetiga casaanka bulukeeti iyo Stadthuys. Qiimuhu waa RM2 / qof (Luulyo 2017). Ogsoonow in baska 17 uu yahay khad wareeg ah, markaa markaad u baahato inaad ku laabato Melaka Sentral waxaad ka qaadan kartaa isla meeshii aad ka degtay, laakiin isticmaalka baska 17 ee aad ugu laabanayso Melaka Sentral waxay ka qaadanaysaa waqti aad uga dheer safarka socdaalka ah (ku saabsan 40min) Hab aad u dhakhso badan (oo ka jaban) waa inaad ku socotaa dhamaadka Jonker Walk ilaa Jalan Kabu. Waxaad ku arki doontaa Kaniisadda Methodist-ka Tamil ee midigtaada iyo boosteejada baska (Perhentian Jalan Kabu) ee ka soo horjeedka waddada (oo loo yaqaan Jalan Kabu). Halkaas, basku wuxuu marayaa 1.5RM (Julaay 2017) wuxuuna ku qaadanayaa 15 daqiiqo inuu ku gaaro Melaka Sentral. Basaska 17 waxay socdaan qiyaastii 20-40 daqiiqo kasta waxayna kuxirantahay taraafikada.
Laga soo bilaabo Sentral, haddii aad rabto inaad taksi u raacdo xarunta beddelkeeda markaa u leexo dhanka dambe ee dhismaha. Waxaa jira boosteejo rasmi ah oo taksi kuu magacaabi doonta. Kuwani waxay caadi ahaan wasakh la yihiin darawallo edeb daran oo gardarro ah si ay u khiyaameeyaan dadka gudaha iyo shisheeyahaba Way diidi doonaan inay isticmaalaan mitirka oo waxay ka qaadaan qiimo aad u sarreeya masaafo gaaban (raacitaanka Melaka Sentral ee aagga dalxiiska ugu weyn ee Jonker Street wuxuu ku saabsan yahay RM 25 iyo wixii ka sarreeya). Dadka maxalliga ah waxay caadi ahaan ugu yeeri doonaan darawallada taksi "samseng" (Malay ee baandooyinka) waxayna kugula talin doonaan in la isticmaalo xulasho wadaagga / e-hailing-ka Uber ama shirkadda maxalliga ah ee Malaysiya loo yaqaan Qaado sida ka raqiisan oo u beddelaad badan oo xirfad leh. Raacitaanka Jonker waxay noqon doontaa qiyaastii RM 8 baabuur nadiif ah oo raaxo leh iyo darawal maxalli ah oo saaxiibtinimo leh. Haddii aad bas ku timaaddo Melaka Sentral, u tag iridda weyn ee laga galo si aad u codsato soo qaad. Ha aadin irridda dambe ee tagaasida qaaliga ahi ku sugaan. Waxaad ubaahantahay inaad kala soo baxdo barnaamijyada taleefankaaga casriga ah kahor imaatinkaaga.
Laga soo bilaabo Kuala Lumpur
Basaska Southbound hadda waxay ka baxaan boosteejada cusub ee basaska Bersepadu Selatan (TBS), oo ku taal meel u dhow saldhigga LRT iyo xarunta KTM Komuter ee Bandar Tasik Selatan. Habka ugu fudud ee looga baxo Chinatown waa socodka saldhiga tareenka ee hore ee Kuala Lumpur (kana soo horjeedka kanaalka kana baxa xarunta LRT Pasar Seni, isticmaal buundada korkeeda) oo raac tareenka KTM Komuter ee RM1.10 ama LRT ka qaado xarunta Masjid Jamek Basasku waxay baxayaan nus saac kasta, tikidka qiimaha ee Melaka Sentral wuxuu udhaxeeyaa RM10 iyo RM15, raacitaankuna wuxuu qaadanayaa 2 saacadood iyo 15 daqiiqo.
Ka sokow, waxaa sidoo kale jira basas maalinle ah oo ka yimaada Madaarka Caalamiga ah ee Kuala Lumpur (wixii faahfaahin ah ka eeg dhowr cutub oo kor ku xusan).
Ka yimid Singapore
Shirkado badan oo basaska ah ayaa si toos ah uga shaqeeya Terminalka baska ee Lavender St. ilaa Melaka Sentral. Jadwalka basku wuu ku kala duwan yahay shirkadaha laakiin qaar ayaa shaqeeya basas saacadle ah. Bandhigga ugufiican oo tikidhada horay u sii sii iibso haddii aad rabto inaad safarto subaxa Sabtida oo aad soo laabato gelinka dambe ee Axadda maaddaama dalxiisayaal badan oo reer Singapore ah ay isku fikrad yihiin. Qiimaha tikidhadu wuu kala duwanaan karaa laga bilaabo agagaarka SGD14-50 hal wado iyadoo kuxiran fasalka baska.
Raacitaanka baska badanaa wuxuu qaataa wakhti kasta inta udhaxeysa 3.5-5 saacadood iyadoo kuxiran inta ay qaadaneyso in laga gudbo xuduudaha Singapore iyo Malaysia, taas oo xilliyada ugu sarreysa ay sababi karto dib u dhac ballaaran. Waa inaad baasaboorkaaga ku shaabbadeysaa daraf kasta oo xuduuda ah waana inaad soo qaadataa dhammaan shandadahaaga markii aad sameysanays gelitaanka dal kasta. Guud ahaan, basku wuxuu kugu sugi doonaa xadka laakiin mararka qaarkood waxay kaa filan doonaan inaad raacdo baska soo socda haddii aad waqti dheer qaadatid inaad ku sii socoto caadada. Hubso inaad xusuusato sida basku u egyahay (nambarka nambarku waa wax aad u fudud oo la xasuusto). Basasku sidoo kale waxay yeelan doonaan joogsi nasasho 20-30min inta lagu jiro wadada aad ka iibsan karto cuntada oo aad ku isticmaali karto qalabka musqusha (kuwaas oo nadiifnimadooda shaki la gelin karo). Aagga kastamka Singapore wuxuu leeyahay tas-hiilaad suuli wanaagsan, haddii loo baahdo.
Qaar ka mid ah shirkadaha ka hawl gala / ka yimaada Malacca waa:
Marmar, waa kan ugu weyn ee basaska ka shaqeeya meel dheer. Waxay ku xireysaa gobolka dalal badan oo ku yaal Jasiiradda Peninsular Malaysia sida Kuala Lumpur, Seremban, Singapore iyo meelo ka sii fog. Basaska ka gudba xilliyada qaarkood waxay ka baxaan magaalada Malacca (Melaka Sentral), Alor Gajah, A'Famosa Resort iyo Masjid Tanah.
Malacca-Kuala Lumpur Express: Basaska saacadda ah ee u dhexeeya Malacca City iyo Kuala Lumpur laga bilaabo 05: 30-19: 00. Tigidhada ayaa ku kacaya RM12.50.
Jebat Ekspres: Basaska taga Kuala Lumpur iyagoo sii maraya Masjid Tanah iyo Alor Gajah.
Malacca-Singapore Express: Basaska saacadda ah ee u dhexeeya Malacca City iyo Johor Bahru iyo Singapore 08: 00-19: 00. Tigidhada waxay ku kacayaan RM19.00 ka / ka Johor Baru, iyo RM22.00 ilaa Singapore. Wadada ka timaadda Singapore ilaa Malacca waa SGD20
Delima Express: Basaska ka imanaya Singapore ilaa Malacca / Malacca ilaa Singapore. Tigidhada ayaa ku kacaya $ 20.80 / RM22 (26RM bishii Luulyo 2017). Goobta lagu fuulo ee Singapore waa City Plaza @ Payar Lebar. Jaaleynta internetka ayaa la heli karaa
Mayang Sari Express: Basaska u socda / ka yimaada Johor Baru Tigidhada waa RM19.00.
MCW Express: Adeegyo isdabajoog ah oo isdaba joog ah Muar, Johor
707 Safar: Shirkadda basaska ugu jecel Shiinaha iyo Singapore oo tagaya Malacca. Ka amba baxeysaa 4-5 jeer illaa / ka imanaya Malacca (Melaka Sentral) iyo Singapore (Queen Street). Ma istaagayo Yong Peng, markaa safarku wuxuu noqon karaa mid gaaban sida 3.5 saacadood. SGD 25 oo ka yimid Singapore; RM25 oo ka yimid Malacca. Xilliga monsoon-ka qiimayaasha sannadka cusub waa SGD 20 oo laga keenay Singapore. Waxaa jira sheekooyin naxdin leh oo ka soo baxaya shirkaddan laakiin ha iska dhigin. Wadahadalkoodu wuu yara xumaan karaa laakiin haddii aad waqti dheer qaadato si aad uga gudubto caadooyinka, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad tusto baska 707 ee soo socda tikidhkaaga waanaad sii socon doontaa. Si kastaba ha noqotee, maahan wax xiiso leh in lagu laalaado soohdinta Malaysia maadaama aysan jirin wax qaboojiye ah.
Magaalada Malacca looma adeego Khadadka tareenka. Saldhigga tareenka ugu dhow wuxuu ku yaal Pulau Sebang / Tampin, ☎ + 60 6 341 1034, degmada Alor Gajah oo qiyaastii 30 km (18 mi) u jirta. Idaacadda waxay ku taal khadka ugu weyn ee Kuala Lumpur-Johor Bahru waxaana u adeega tareennada oo dhan.
Bas ahaan:Baska "Tai Lye" wuxuu ka tagaa magaalooyinka Tampin wuxuuna aadaa Malacca. Waxaad raadineysaa bas # 26. Markii aad ka degto tareenka, u soco wadada midigta ilaa 400m ilaa aad ka gaarto wadada weyn. Waxaad hadda haysataa laba ikhtiyaar. 1) Jidka ka gudub oo sug inta baska 26 uu kuu imanayo, si waalli ah ugu ruxrux, oo wuu joogsan doonaa inuu ku qaado. 2) Markaad gaarto wadada weyn, bidix u leexo oo qiyaastii 600m u soo gal magaalada. Waxaad imaan doontaa isgoyska T ee wadada weyn, waddo laanteeda bidix looga tago buur. Ku soco jidkaas qiyaastii 200m saldhigga baskuna wuxuu ku yaal bidixdaada. Tani waa khatar yar laakiin waa xulasho socod badan. Haddii aad haysato shandado fara badan, waxaad sidoo kale taksi ka raaci kartaa xarunta tareenka ilaa boosteejada basaska. Haddii socodka kaa lumo, kaliya weydii dadka deegaanka "istaanka basaska". In yar baa halkan ku hadasha Ingiriisiga, laakiin way fahmi doonaan meesha aad rabto inaad u tagto. Kharashka basku waa RM4.30, waxaadna ubaahan doontaa lacagta dhabta ah ee Ringit si aad ugubixiso. Safarku wuxuu qaadanayaa saacad iyo badh.
Baska “Salira” (buluug khafiif ah iyo jaalle) wuxuu kaloo ka baxayaa Melaka Sentral wuxuuna tagayaa Tampin isagoo sii maraya Ayer Keroh iyo Durian Tunggal. Baska kaga deg isla goobta ay ku taal Tai Lye.
Taksi ahaan:Waa inay joogsataa taksi ama laba istaanka tareenka oo sugaya qof adiga oo kale ah inuu yimaado. Haddii aysan jirin, ku soo gal magaalada adoo tilmaamaya kor ku xusan. Waxaad arki doontaa mid goor dhow. Qiimaha wuxuu noqon doonaa meel kudhow RM50, laakiin waxaad isku dayi kartaa xoogaa yar inaad jabiso. Si kastaba ha noqotee, u oggolow inay kuu kaxeeyaan hudheelkaaga, ama haddii ay kuu qaadi karaan oo keliya Malacca Sentral, hel qiimo jaban (ha sugin inaad tan kaga wada hadashid taksiga!). Si daacadnimo ah, haddii aad lacag haysato, iyo in ka badan shandad keliya, tani waa ikhtiyaarka ugu fudud. Baabuurtu waa hawo qaboojiye (gorgortan kale haddii aysan ahayn), oo waxay leeyihiin meel jir u ah qalabkaaga. Waxaa intaa dheer, waad la wadaagi kartaa kharashka ilaa saddex qof oo kale. Ama hadaad kaligaa tahay, waxaa laga yaabaa inuu jiro qof deegaanka ah oo sidoo kale isku dayaya inuu tago Malacca oo qadarin doono raacitaan bilaash ah? Xusuusnow inaad badbaado leedahay in kastoo. Ha galin taksigaaga illaa darawalku uu wado, had iyo jeer ku bixi meesha aad u socoto, oo alaabadaada fiiri! Safarka tagsi wuxuu qaadanayaa ilaa 40 daqiiqo.
Malacca waxaa laga heli karaa Wadada North South Expressway. Markaad ka imanaysid koonfurta, baabuur ku raac E2 oo ka tag wadada weyn ee ah Ayer Keroh bixid Bedel ahaan, qofku wuxuu ka tagi karaa wadada weyn ee bixitaanka Simpang Empat wuxuuna sii mari karaa wadada caadiga ah ee Malacca. Wadadani waxay mari doontaa magaalada Alor Gajah oo hadda waddo cusub oo weyn (waddo giraan ah) la dhammaystiray, safarka ka imanaya Simpang Empat ilaa Malacca wuxuu ku qaadan doonaa ugu yaraan 20-30 baabuur.
Magaalada Malacca waxay ku taal Wadada Jirridda Xeebta (Waddada Federaalka 5), ​​waxaana laga heli karaa Waddada Weyn ee Main (Federal Route 1) adigoo daminaya Simpang Kendong ama Tampin, Negeri Sembilan. Malacca waxay 150 km (93 mi) ka jirtaa Kuala Lumpur, 216 km (134 mi) Johor Bahru, iyo 90 km (56 mi) Port Dickson.
Kuwa doonaya hab fudud oo toos ah oo looga baxo midkood Kuala Lumpur's LCCT ama garoonka diyaaradaha KLIA ilaa Malacca, habka ugu fudud ayaa ah kiraynta ama kireysiga gaari ama gaari yar. Waxay kugu qaadan doontaa qiyaastii 1-1.5 saac inaad halkaas gaarto. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa RM150-RM400 iyadoo kuxiran nooca gaariga iyo muddada kirada.
Adeegyada taksiga ee la aqoonsan yahay ayaa laga heli karaa dhammaadka Jalan Kee Ann. Waxay ku dhex safraan gobolka Malacca iyo banaanka Malacca sida garoonka diyaaradaha ee KLIA International iyo Kuala Lumpur waxayna qaadaan ilaa 4 rakaab ah markiiba. Taksiyo badan ayaa u isticmaali doona qiimo go'an halkii mitir loogu talagalay safarada noocan oo kale ah, markaa waa inaad ku heshiiso qiimaha intaadan soo galin. Haddii aad ka fogaato gorgortanka, hudheelada badankood way awoodaan inay kuu ballansadaan safaradan (in kastoo qaarkood laga yaabo inay qaataan komishan weyn, markaa hubi qiimaha), ama waxaad ka dalban kartaa khadka tooska ah shirkado badan. Qiimaha caadiga ah ee KLIA waa kudhowaad 150-200RM, waxayna kuxirantahay nooca gaariga. Tagaasida qoyska waxaa laga heli karaa shirkadaha qaarkood.
Doomaha maalin kasta waxay u socdaan kana soo degaan Bengkalis, Dumai iyo Pekanbaru oo ku yaal Sumatra, Indonesia. Doomaha oo dhan way yimaadaan kana baxaan Diyaaradda Harbor Master (Jeti Shahbandar) Taman Melaka Raya oo u dhow Matxafka Badda.
Helitaanka halkaa:: Malacca Town Bus No. 17 (Green) wuxuu aadayaa meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Harbor Master kaasoo wax yar uun ka hooseeya wadada ka timaada Fagaaraha Cas.
Ka yimid Dumai:
Tunas Rupat Kala Soco I Express (Waalidka tigidhada ee Malacca Jln PM10 Melaka Raya. ☎ + 60 6 281 6766, office + 60 6 283 2506, +60 6 283 2516; wakiilka Dumai: Jl. Jend. Sudirman 4. ☎ + 62 7 653 1398) doonta maalin walba. Waxay Malacca uga ambabaxayaan Dumai 9AM iyo 3PM. Waqtiga safarku wuxuu kayaryahay 2 saac. Tigidhadu waxay ku kacayaan RM110 / 170 1-way / soo celin.
Laga soo bilaabo Pekanbaru:
Tunas Rupat Kala Soco I Express (Meesha kaararka tikidhada ee Malacca ee ku taal Jln PM10 Melaka Raya. Tel: +60 6-2816766, xafiiska ☎ +60 6 2832506, +60 6 2832516; wakiilka Pekanbaru: Jl. Tanjung Datuk No 153, Pekanbaru. ☎ + 62 761 858777) ayaa leh doomo laga bilaabo Pekanbaru ilaa Malacca maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha saacadda 09:00. Laga soo bilaabo Malacca ilaa Pekanbaru, waxay baxaan Talaadada, Khamiista iyo Sabtida 9:30 AM. Safarku wuxuu qaadanayaa lix saacadood iyo badh. Tigidhadu waxay ku kacayaan RM120 / 210 1-way / ka soo noqoshada Malacca ilaa Pekanbaru.
Adeegyada Doomaha ee NNH Qolka tigidhka ee Malacca G-15, Jln PM10, Plaza Mahkota Melaka Raya. 60 + 6 288 1334 XNUMX ayaa wadda Pelita Jaya doonta ka timaada Malacca ilaa Pekanbaru maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha 9AM.
Laga soo bilaabo Bengkalis:
Kooxda Laksamana (Xafiiska tigidhada tigidhka ee Malacca wuxuu ku yaal Jln PM10, Plaza Mahkota Melaka Raya) wuxuu leeyahay doonyo ka yimaada Malacca ilaa Bengkalis oo ka tirsan Gobolka Riau, Sumatra, maalmaha Talaadada, Khamiista iyo Sabtida ee tagaya 1100. Ferries ku xirmaan Selat Panjang halkaas oo ay ku yaalliin doonyo u socda Batam iyo Jasiiradaha kale ee loo yaqaan 'Riau Islands'. Bengkalis, doonta waxay ka baxaan Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha 9:30 AM.
Mulia Kencana (Xafiiska tigidhada ee Malacca Stall No. 5, Jln PM10, Plaza Mahkota Melaka Raya. Mobile ☎ + 60 13 373 3545, +60 16 682 6896, +60 12 339 8428) waxay ka shaqeeyaan seddex markab usbuucii Malacca ilaa Bengkalis. Doomaha ku xira magaalada Duubista. Laga soo bilaabo Malacca, doomaha waxay ka baxaan Talaadada, Jimcaha iyo Axadaha saacadda 1PM. Tigidhadu waxay ku kacayaan RM50 / 80 1-way / soo celin. Tigidhada laga soo qaado Bengkalis ilaa Pakning waxay ku kacayaan Rp 10,000 oo dheeraad ah.
Bengkalis looma liisgareynin meel fiiso la'aan ama fiiso-imaatin ah oo laga soo galo Indonesia. Si kastaba ha noqotee, kuwa xaq u leh inay soo galaan fiiso la'aan, ama ugu yaraan kuwa haysta baasaboorka Malaysia, uma muuqdaan inay la kulmayaan wax dhibaato ah.
Wixii ugu dambeeyay ee Coronavirus Covid-19 Cusbooneysiinta garoomada diyaaradaha fadlan booqo Websaydhadeena Malacca sinnaba uma ahan magaalo yar, laakiin inta badan goobaha ugu waawayn waxay ku dhexjiraan masaafad fudud oo midba midka kale ah waxaana si fiican loogu sahamiyaa lugo. Xusuusnow inaadan hakad galin taraafikada inta aad sawirada ka qaadanaysid dhismayaasha. Dadka deegaanka guud ahaan waxay leeyihiin dareen wadis wanaagsan waxayna u hoggaansamaan sharciyada taraafikada.
Nidaam monorail ah oo dhererkiisu yahay 1.6-km ayaa la furay Oktoobar 2010. Wuxuu isku xirayaa Saldhigga Taman Rempah iyo Hang Tuah Station. Jidka hal-abuurka ayaa ku yaal hareeraha webiga laakiin laga bilaabo Diseembar 2018 ganacsi ma jiro.
Wadooyinka waayeelka / taarikhda magaalada aad ayey u cidhiidhsan yihiin, sidaa darteed si dhakhso leh ayey u xirmaan inta lagu jiro saacadaha ugu sarreeya. Tani waxay si gaar ah u tahay inta lagu jiro dhamaadka usbuuca, marka gawaarida ka timaada qaybaha kale ee Malaysia iyo Singapore ay ku fatahaan magaalada. Helitaanka meel gawaarida la dhigto sidoo kale aad ayey u adag tahay maalmaha fasaxa. Inta badan waddooyinka sidoo kale waa hal-waddo, markaa u qorshee dariiqaaga si habboon.
Ka fogow tagaasida haddii ay suurogal tahay isticmaalna gawaarida elektaroonigga ah ee Uber ama Grab raac. Tagaasida waxaa lagu yaqaan inay anshax xumo iyo dagaal badan yihiin, waxayna diidaan inay isticmaalaan mitirrada iyo inay dadka rakaabka ah siyaadiyaan. Tagaasida sharciyeysan waxay ku kacaysaa RM20 meelkasta oo magaalada ah halka raacitaanka e-hailing laga yaabo inuu ka hooseeyo kala bar qiimaha baabuur aad u badbaado badan oo nadiif ah iyo darawal.
Baska Magaalada Malacca No 17: Melaka Sentral Terminal ee xudunta taariikhiga ah, Mahkota Parade, Melaka Raya iyo Dejinta Bortuqiiska. Qiimaha laga bilaabo Melaka Sentral ilaa Makhota Parade waa RM1.50 ilaa 2.00 (Ogosto 2018). Baska ugu dambeeya ee ka yimaada Melaka Sentral wuxuu baxaa 8:30 PM fiidnimo, ka dib waa inaad raacdaa taksi qiimihiisu yahay RM 25 ilaa Mahkota Parade, ama Uber/Grab RM 8. Si aad baska No 17 uga hesho Melaka Sentral, ama raadi calaamad buluug ah oo leh “Basaska Guriga” ama weydii qof meesha uu joogo. Aagga baska gudaha wuxuu ku yaal xagga dambe ee Terminalka Sentral. Qaybta boosteejada gudaha waa hab goobaabin ah, oo leh barkinno la dhigto basaska lagu tiriyo 1 illaa 18. Basaska No 17 u ah xudunta taariikhiga ah, waxaad u baahan tahay inaad tagto baaska No 17. Sidoo kale gudaha albaabada ay basaska dadweynaha ka baxaan, waxaa yaal miiska yar ee macluumaadka. Ogsoonow marka aad ka soo laabanayso Makhota Parade, baska 17 wuxuu maraa waddada weyn (Jalan Syed Abdul Aziz ama Lebuhraya Coastal) oo ku taal koonfurta Xarunta dukaamaysiga Makhota Parade, oo ka gudubta buundada weyn ee dekedda ka dibna u leexata dhinaca waqooyi waddo isku magac ah oo mar labaad u socota Jalan Kubu ka hor intaadan istaagin kaniisadda Tamil ee ku xigta Jonkers Walk. Laga soo bilaabo joogsigan, waxay qaadataa 10-15m oo keliya saldhigga baska halkii ay ka ahaan lahayd 1 saac haddii aad u qaadato dhinaca kale. Si aad uga timaado Melaka Sentral oo ka timaadda Jonker Street, u soco dhamaadka woqooyi ee Jonkier St, ilaa istaanka baska ee ka soo horjeedka Kaniisadda Tamil Methodist (Perhentian Julan Kubu) ama banaanka Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTM) Campus Magaalada Jalan Hang Tuah oo raac bas No 17 (RM1, 10 daqiiqo).
Baska Magaalada Malacca No 8: Melaka Sentral ilaa Square Square oo loogu talagalay RM1.
Baska Magaalada Malacca No 18: Melaka Sentral Terminal ilaa Tengkera una sii socda Pokok Mangga
Baska Magaalada Malacca No 19: Melaka Sentral Terminal ilaa Ayer Keroh (Melaka Zoo iyo Taman Asean / Malaysia). Qiimaha laga raaco Melaka Sentral ilaa Ayer Keroh (Melaka Zoo iyo Taman Asean / Malaysia) ayaa ku dhow RM 3
Baska Magaalada Malacca No. 50: Melaka Sentral Terminal ee Xarunta dukaamaysiga Mahkota Parade iyo makhaayadaha cuntada badda ee u dhow
Kenderaan Aziz (casaan iyo cadaan): Basaska ka yimaada Melaka Sentral ilaa Muar iyada oo loo marayo Padang Temu sidoo kale waxay dhaafayaan xuddunta taariikhiga ah, Mahkota Parade iyo Melaka Raya
Guud ahaan nidaamka basaska ee Malacca wuu ka xun yahay qaska: ma muuqato jadwal (qofku wuxuu sugi karaa in ka badan hal saac baska xeebta waqooyiga ka xiga Malacca), iyo macluumaadka ku saabsan meesha iyo basaska ay raacayaan at Sentral waa wax aan jirin (waxaad nasiib ku yeelan kartaa markaad fiiriso waraaqaha daabacan ee ku soo dhow basaska hore).
Trishaws, oo lagu dhameystiray muusigga muusigga ah iyo ubax been abuur ah ayaa la heli karaa iyo sidoo kale safarro gaagaaban oo u dhexeeya meelaha dalxiiska ama dalxiisyada wareegsan. Wadayaashu waa kuwo faraxsan oo saaxiibtinimo leh. Heerka socda waa RM 40 saacaddii, laakiin sii qiimee qiimo kasta kahor.
Bicycle, kireysto baaskiil ama ku biir kooxda safarka baaskiilka, fiiri qeybta Do ee kireynta baaskiilka iyo kooxaha. Qaar ka mid ah hoteelada, guryaha iyo hoteelada ayaa amaah ama kireysi siiya martidooda martida u ah dalxiiskooda. Soojiidashadaha waaweyn ee maxalliga ah waxay leeyihiin waddo ballaadhan oo gudaha ah ama nidaam lagu raaco oo badanaa leh baaskiilado.
Doonta webiga : Melaka River Cruise waxay bixisaa adeeg 'hop-on hop-off' (RM 30 / maalin), laakiin inta lagu jiro waqtiyada mashquulka ah (habeenka usbuuca dhammaadkiisa) ha fileynin inaad boos ka hesho meel aan ka aheyn meel u dhow xafiiska tikidhada.
Baadhitaano badan oo ku saabsan Meelaha Xalaal ee Maleeshiyada ah
Hagaha Xalaasha ee Cameron Highlands
Tilmaamaha Safarka ee Xalaasha ah ee Langkawi
Hoteelka Casa Del Rio Melaka
Hoteelka Ikuatoriyaalka Melaka
Dalxiiska Xeebta ee Klebang Melaka
Hoteelka Majestic ee Malacca
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Malaysia > Tilmaamaha Safarka Malacca Xalaal
Safarka Xalaal ee Taiwan